महिनावारी कुन उमेरमा कस्ता समस्या ? – Etajakhabar
किन आउँछ समस्या ? -महिनावारीमा आउने समस्यामा कतिलाई वंशाणुगत गुणले पनि काम गरेको हुन्छ । आमा हुने समस्या छोरीमा समेत देखिन सक्छ ।
११–२२ वर्ष उमेर समूह -यो उमेर समूहका युवतीमा महिनावारी रोकिने समस्या अत्यधिक हुने गर्छ । विशेषगरी कलेज पढ्ने युवतीहरू महिनावारीको समस्या लिएर अस्पताल आएको पाइन्छ ।
२२–३५ वर्ष उमेर समूह -आमाले पटक–पटक जीवित शिशु जन्माउन नसक्दा पनि स्वास्थ्यमा असर पुग्न जान्छ । यस्तो हुँदा एक्कासि महिनावारी रोकिने समस्या हुन्छ । बच्चा खेर गइरहँदा पाठेघर बिग्रन्छ र महिनावारी रोकिन पुग्छ ।
४० वर्षपछि ४० वर्षपछि भने यसै पनि महिलामा हर्मोनको कमी हुन जान्छ । यदि त्यो समयमा शरीरले आवश्यक हर्मोन उत्पादन गर्न सकेन र त्यसअनुसार सन्तुलित आहारको प्रयोग गरिएन भने
महिनावारीमा समस्या देखिन्छ । त्यस्तै, योनिबाट रगत बगेमा र सम्भोगको समय रगत देखा परेमा पाठेघरमा ट्युमर नै हुन सक्छ । यस्तो समस्या देखिएमा रगत जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ ।
नियमित नभएमा हर्मोनमा असन्तुलन भई महिलामा महिनावारी रोकिँदा स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखा पर्न थाल्छन् । यसो भएमा पुरुषको जस्तै रौँ बढ्ने, मोटोपना, अण्डा उत्पादन गर्न नसकी गर्भधारणमा समस्या देखिनेलगायत हुन्छ । यदि नियमित महिनावारी रोकिएमा स्वास्थ्यमा कुनै न कुनै
समस्या आएको बुझ्नुपर्ने हुन्छ । जीवनशैली र खानपानले पनि यसमा प्रभाव पार्छ । यौनांगको सरसफाइको कमी, संक्रमणलगायतले समेत महिनावारीमा समस्या सिर्जना गर्छ ।
कसरी हुन्छ उपचार ? हर्मोनको कमी वा गडबडीका कारण महिनावारीमा समस्या देखिने भएकाले हर्मोनको सप्लिमेन्ट गर्नुपर्छ । पाठेघरको मुख नखुल्दा पनि महिनावारीको नियमितता टुट्न सक्छ । यस्तो भएमा शल्यक्रिया नै गरेर पाठेघरको मुख खुलाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पौष २१, २०७४ समय: ९:५६:५३